Fanalahidy hahatakarana ny valim-bolan'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Tany am-piandohan'ity herinandro ity Apple nanao ampahibemaso ny valiny ara-bola mifandraika amin'ny telovolana voalohany amin'ny taom-piasana 2016 ary na dia namaky firaketana indray aza izy tamin'ny "varotra telovolana 75.900 miliara dolara sy tombony 18.400 miliara dolara isam-bolana" raha oharina amin'ny "varotra 74.600 miliara dolara sy tombony 18.000 XNUMX tapitrisa dolara (…) azo tamin'ny telovolana teo ihany tamin'ny taon-dasa ”, navela ny isa tsiro mamy sy marikivy eo amin'ireo tompon-trosa satria mampiseho fa miova ny lafiny sasany ary tonga ny fotoana hiatrehan'ny orinasa fanamby vaovao.
1 Inona no asehon'ny valiny ara-bola an'i Apple?
1.1 1 ny fanamby iPhone
1.2 Tanjona 2: hanavao ny iPhones ny mpampiasa
1.3 Tanjona faharoa: vokatra vaovao
1.4 4.Teny an-dàlana ny Wall Street
1.5 5. Tsy Apple intsony no orinasa lehibe indrindra
1.6 6. Toe-javatra ara-bola amin'ny fialonana
1.7 7 ny gisa vaovao nametraka ny atody volamena
1.8 8. Ny fivoaran'ny toekarena manerantany
1.9 9. Sazy mety hialana amin'ny hetra
1.10 10. Ny fihenan'ny varotra isan-taona voalohany dia manakaiky hatramin'ny 2003
Inona no asehon'ny valiny ara-bola an'i Apple?
Raha toa ka hatramin'izao ny hany vokatra nateraky ny orinasa nampiseho ny fihenan'ny fivarotana mitohy sy ny fahaverezan'ny fizarana tsena isaky ny telovolana dia ny iPad, Toa nipoitra ny iPhone ary sambany tsy nahomby ny fivarotan'izy ireo. Ho fanampin'izay, ny abidia, ray aman-dreny vaovao an'i Google, dia nahatratra an'i Apple ho orinasa lehibe indrindra.
Noho izany, Apple dia tsy maintsy manomboka mieritreritra lafin-javatra sasany:
1 ny fanamby iPhone
Ny telovolana voalohany niresahan'ireto valim-pifidianana ireto dia mifanitsy amin'ny vanim-potoanan'ny varotra Krismasy, ny vanim-potoana fivarotana lehibe indrindra amin'ny taona na izany aza, ary na dia efa namidy singa iPhone 74,8 tapitrisa aza i Apple, Apple dia tsy nahatratra ny tanjona kendrena napetraka, izay nandiso fanantenana lehibe teo amin'ireo mpampiasa vola satria tsy adinonay fa miresaka momba ilay sainan'ny orinasa lehibe izahay. Tsy isalasalana fa ny vidiny, isan-taona avo noho ny teo aloha, dia singa iray mamaritra. Toy izany koa ny "fanatsarana efatra" amin'ny taranaka S dia tsy ampy handresy lahatra ary ambonin'izany rehetra izany, hanamarinana ny famoahana ara-bola vaovao ataon'ny mpanjifa. Ity toe-javatra ity dia mitarika antsika mivantana amin'ny fanamby vaovao.
Tanjona 2: hanavao ny iPhones ny mpampiasa
Mahomby. Manaiky izany ny mpandinika maro Niakatra ny fiovan'ny iPhone any amin'ny firenena mandroso ary izany Ny tanjon'i Apple izao dia tokony ho an'ireo mpampiasa manana iPhone antitra hanavao azy. Ny CEO Apple Apple Tim Cook dia nilaza hoe: "60% ny tompona iPhone dia manana iPhone 5S, iPhone 5C, na ambany." Eo no hihazonana sy hitombo ny lakilen'ny fivarotana iPhone, saingy ho vitany ve izany amin'ny vidiny lafo? Ilay honohono ve iPhone 5se ary ny manaraka iPhone 7 noho izany antony izany?
Tanjona faharoa: vokatra vaovao
Miaraka amin'ny iPhone "mahakivy" voalohany, miaraka amin'ny iPad tsy mitsaha-mitombo ny fizarana frame, ary miaraka amin'ireo vokatra toa ny Apple TV na ny Apple Watch izay, na dia raisina tsara aza, dia tsy mandray tsara ny vokatra hafa, manana ny fanambin'ny orinasa izy mamorona vokatra vaovao sy manavao, izany hoe, mamorona filàna vaovao amin'ny mpanjifa, na ataovy mahita ireo izay heverinay fa tsy hitanay, mba hamoahana indray ny varotra.
4.Teny an-dàlana ny Wall Street
Ny anjaran'i Apple dia nilatsaka nandritra ny volana maro ary ny fanehoan-kevitra momba ireo valiny ireo, na dia mahazatra aza, dia eo noho eo: Nidina indray ny fizarana Apple hatramin'ny 6% avy amin'ny fampitana ny valiny. Ary mampiahiahy be ny mpampiasa vola izany.
5. Tsy Apple intsony no orinasa lehibe indrindra
Apple dia navarina ho tahiry "sanda" fa tsy tahiry "fitomboana", ary izany dia satria ny mpifaninana aminy lehibe, Alphabet, izao dia mihoatra izany amin'ny maha orinasa manana kapitaly avo indrindra azy. Ireo vokatra dia efa 'matotra' hatramin'ny nanombohany tamin'ny fahatsapana fa manomboka mijaly ny fitomboan'ny varotra. Tsy afaka nitazona fitomboana mahavariana toy ny nasehon'i Apple tato anatin'ny taona vitsivitsy, sa izany?
6. Toe-javatra ara-bola amin'ny fialonana
"Nahazo vola mitentina 27.500 miliara dolara avy amin'ny asa natao izahay nandritra ny telovolana, ary namerina $ 9.000 miliara tamin'ireo tompon-trano tamin'ny alàlan'ny fividianana vola sy dividends," hoy i Luca Maestri, lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola ao Apple. Eny tokoa, na eo aza izany fahatsapana hafahafa izany taorian'ny nahafantarany ny valim-bola natolotr'i Apple, dia manana vola "216.000 tapitrisa" vola sy orinasa ara-bola manahirana ity orinasa ity izay mamela azy hanohy ny drafitra nomeny.
7 ny gisa vaovao nametraka ny atody volamena
Mijaly ny toekarena sinoa, amin'izao fotoana izao, fihenam-bidy, na izany aza, ny fidiram-bola azon'i Apple ao amin'io firenena io dia nitombo 14% tao anatin'ny taona iray, nahatratra 18.373 XNUMX tapitrisa dolara. Sina no gisa vaovao mametraka atody volamena ho an'i Apple, amidiny mihoatra noho ny ao anatin'ny fari-taniny voajanahary, ary Tim Cook dia mbola mitazona ny fahatokisany fa ny hafainganam-pandeha dia hijanona farafahakeliny: "mihoatra ny fiovan'ny fotoana fohy matoky ny mety maharitra amin'ny tsena sinoa, ary mahita fotoana be izahay. Mitazona ny fampiasam-bolanay izahay.
8. Ny fivoaran'ny toekarena manerantany
Na Apple dia tsy mahatsikaritra ny toe-karena manerantany ary indrindra indrindra, ny fivoaran'ny dolara izay, raha ny filazan'ny orinasa, dia nandratra azy ireo hatramin'ny farany izay mety ho hatramin'ny 15% ny vola azon'izy ireo. Mazava ho azy, ny dolara lafo kokoa dia dolara tsy mifaninana.
9. Sazy mety hialana amin'ny hetra
Ny komisiona eropeana dia manohy ny ady amin'ny fisorohana hetra mety hitranga amin'ny alàlan'ny orinasa vaventy marobe izay mampiasa «fikafika» toa ny famenoana irlandera miaraka amin'ireo sampana faktiora amin'ny alalàn'izy ireo, satria manome tombony hetra lehibe any izy ireo. Vao tsy ela akory izay, ary raha ny filazan'i Blomberg, dia fantatra fa Apple dia tokony hiatrika fandoavam-bola 8.000 tapitrisa Euros, raha jerena izay rehetra tsy naloany taona lasa izay. Tsy tian'ny mpampiasa vola izany, na dia eritreretintsika fa raha mbola tsy misy ny olana dia tsy mitaraina izy ireo. Izy io koa dia manome sary ratsy ho an'ny orinasa sarotra diovina.
Noho io antony io dia efa nanaiky ny handoa ny haba mifanaraka amin'ny folo taona lasa tany Etazonia i Google, izay mifanohitra tanteraka amin'i Apple.
10. Ny fihenan'ny varotra isan-taona voalohany dia manakaiky hatramin'ny 2003
Apple dia maminavina ny vola miditra amin'ny telovolana faharoa eo anelanelan'ny $ 50.000 miliara ka hatramin'ny $ 53.000 miliara, vola ambany noho ny vinavinan'ny tsena ($ 55.000 miliara) sy 58.000 miliara dolara ho an'io fe-potoana io tamin'ny taona lasa.
Nifindra ve i Apple? Mety eny. Na dia misy antony exogenous mihoatra ny fifehezany aza izay nisy fiantraikany tsy azo ihodivirana (ny fivoaran'ny dolara, ny krizy eran-tany, sns.), Ny marina dia betsaka ny zavatra miankina mivantana amin'ny orinasa.
Angamba, ny fampiatoana ny vidim-piainana tsy mitsaha-mitombo (amin'ny tranga iPhone, Mac sasany, sns.) Ary ny fialana amin'ny tsingerin'ny fanavaozana vokatra mihombo be loatra ary tsy ilaina loatra dia mety ho lakilen'ny famelana an'i Apple hitombo mihoatra ny fanavaozana tsotra izay efa nataon'ireo mpampiasa azy ny vokatr'izy ireo.
SOURCE | Bolsamania
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fanalahidy hahazoana ny vokatra ara-bola an'i Apple
Locader, Ovaina ny sary an-tsaina mifototra amin'ny toerana misy ny Mac anao